Bata IC Makadhi Akachenjera
RFID UHF 860-960MHz Makadhi
Dual Frequency chip RFID Kadhi
Ndezvipi Zvishandiso Zvakanyanya Kukodzera simbi Mazita?
Aluminium Pazvinhu zvese-zvakakomberedza zvinhu zvinobatsira, aluminium ingangofungidzirwa kuve nhamba yekutanga. Sezvo iri yakasimba uye isina huremu, yanga ichishandiswa kugadzira zvese kubva pasoda magaba kusvika kumativi enhandare. Neraki, izvozvi hunhu zvinoita kuti chive chisarudzo chakanakisa chetsika namesplates sezvo isu ...
Iyo yakangwara RFID pet trace kugona kugona manejimendi inoshandisa inotungamira RFID tekinoroji yekubatanidza RFID redhiyo frequency kuzivikanwa chipfu machipisi, ruoko rwakabata vaverengi uye dzinovaraidza manejimendi masisitimu kuita imwe nesoftware, ichiziva yakanyanya inoshanda trace kugona manejimendi kusvika parizvino. Iyi system i ...
RFID asset manejimendi system
Fixed asset manejimendi ibasa rakakosha kwazvo kune rese bhizinesi. Yakanaka asset manejimendi inogona kunyatso kuratidza mabhizinesi mhedzisiro uye mashandiro ebhizinesi uye nekupa hwaro hwekuongorora basa remakadhi panguva yekutonga. Zvikasadaro, kusarongeka manejimendi kunoguma nekugadzira m ...
NFC pabasa patrol tag
Iyo APP-based NFC patrol system inoenderana neNFC tekinoroji uye opareta maratidziro, uye inotora yakavhurika dhizaini dhizaini uye modular mashandiro dhizaini yekuona kusangana kweNFC tag kunyoreswa, kuunganidzwa kwedata, zvemukati kupinda, chaiyo-nguva kurodha kadhi data, rekodhi manejimendi, Query sta ...
Machira ekuwachisa anogadzirwa neyakagadzikana uye ari nyore ePPS zvinhu. Ichi chinhu chakakwirira-kuomarara crystalline nebwe ouinjiniya mapurasitiki pamwe akatsiga mamiriro. Iine zvakanakira yakanyanya kupisa tembiricha, yakanaka kuputira mashandiro, kemikari kuramba, isiri-chepfu, murazvo reta ...
RFID yemagetsi tag ndeye isiri-yekubata otomatiki yekuzivikanwa tekinoroji. Iyo inoshandisa radio frequency frequency kuratidza zvinhu zvinovavarira uye kuwana data rakakodzera. Basa rekuzivisa haridi kupindira kwevanhu. Seshanduro isina waya yeiyo barcode, RFID tekinoroji haina mvura uye anti ...
Iyo yechinyakare inotonhorera cheni zvigadzirwa uye yekuchengetera logistics monitors haina kunyatso kujeka, uye vanotakura uye vechitatu-bato logistics sevhisi vanopa vane yakaderera mutual trust. Ultra-yakaderera tembiricha chikafu chemufiriji, yekuchengetera zvinhu, kuendesa matanho, uchishandisa RFID temperat ...
NFC emagetsi masherufu zvinyorwa zvinoshanda kune Wal-Mart, China Zviwanikwa Vanguard, Rainbow, zvimwe zvitoro zvakakura uye matura makuru. Nekuti izvi zvitoro uye matura zvinonyanya kuchengeta zvinhu, manejimendi anodikanwa akaomarara uye akaomarara. Ngatitorei muenzaniso kuratidza kuti iyo ...